ODP & ONAG oo xaalkoodu meel adag marayo |
ODP & ONAG oo xaalkoodu meel adag marayo
Gudiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga oromda (ODP) oo maalintii shalay kulan ay ku qiimaynayeen xaalada amniga ee deegaanka oromiya kuyeeshay caasimada ayaa go’aamo dhawr ah kasoo saaray. Go’aamadaas ayaa waxaa kamidahaa eedaymo culus ooy u soo jeediyeen jabhada hubaysan ee ONAG ooy kusheegeen inay kawado deegaanka falal isugujira; dil, dhac, kufsi, beegsi hay’adaha nabadgaliyada deegaanka, gubid goobaha adeeg bixinta bulshada, jid gooyo iyo xasilooni daro.
Go’aamada ODP soo saareen ayaa sidookale ka mid ahaayeen, inayna maanta laga bilaabo udul qaadanaynin dhibka ay bulshada ku hayaan nabadiidka ONAG isla markaana talaabo sharci ah kaqaada yaan gacan bir ahna ku qaban doonaan.
Gudoomiyaha ururka OLF (ONAG) Daa’uud Ibsa, oo ka fal’celinaya war murtiyeedkii ODP shalay soo saartay ayaa maanta war saxaafadeed ku bixiyay magaalada Addis Ababa. Gudoomiyaha ayaa si wayn u beeniyay eedaymaha ay ODP iyo xukuumada deegaanka oromiya usoo jeediyeen jabhadiisa, bal wuxuu sheegay inay iyagu yihiin kuwa abuuraya colaada iyo xasilooni darada ooy waliba doonayaan inay oromiya kadhigaan goob dagaal.
Daauud ibsaa oo hadalkiisii siiwatay ayaa yidhi “dawladu waxay jabisay heshiiskii aan ku kala saxiixanay magaalada Asmara ee caasimada Eritrea, hadana inay dagaal nagu qaadayaan ayay ic’laamiyeen”. Go’aanada deg-dega ah eek a dhanka ah jabhada ONAG ee ay dawladu qaadanayso ayaa sababaya isku dhaca dhex maraya ciidanka dawlada iyo ciidankanaga- oo isdifaac kujira maadaama saldhigyadoodii lagu soo raadsanayo ayuu yidhi Daauud ibsa.
Iskusoo wada duuboo, arintan ayaa umuuqata mid aan wali xal nabadeed laga gaadhin gacan kahadal iyo way inootahayna maraysa, taasoo sii labanlaabaysa dhibaatadii 4-6 dii bilood ee lasoo dhaafayba bulshada kunool deegaanka oromiya gaar ahaan gobolada, galbeedka Wolega, gobolka Baali, iyo meela kalaba kusoo jireen oo dhamaanba adeegyadii aasaasiga ahaa ayna shaqaynin sida kucad war murtiyeedkii uu shalay soo saaray ururka ODP.